कला साहित्य – Page 14 – Halkaro
कविताः अन्तिम युद्ध
प्रकाशित मिति : २०७३, ७ श्रावण शुक्रबार October 22, 2016
यहिनेर, समयको एउटा भित्तामा लेखिदेउ शताब्दीको यो अन्तिम युद्ध किनकी तिम्रो मुठ्ठीमा पनि टिक्ने छैन यो बलवान समय एउटा साँझ सकिएर अर्को सूर्य उदाएको दिन तिमीलाई पछार्दै तिम्रो मुठ्ठीबाट फुस्केर समय आफै मुस्कुराउने छ रगतले तिर्खा मेटिन्न भने हावाले पेट भरिन्न भने कसरी भरिन्छ सपनाले मात्र जीवन कसरी मुस्कुराउछ दुखमा मात्रै मान्छे एउटा अव्यवस्थित मुलुकको […]
अशोकको प्रेममा ‘जुइनो’ले बाँधिएकी ‘चपली हाइट’ गर्ल विनिता
प्रकाशित मिति : २०७३, २८ जेष्ठ शुक्रबार October 22, 2016
फुच्ची पातली केटी सँधै ऐना अगाडि उभिएर सिँगारपटार गरिरहनु पर्ने । छिन,छिनमा हात मुख धोइरहनु पर्ने । छिनछिनमै कपडा फेरिरहनु पर्ने । एकदिन आमाले सोध्नुभयो, ‘नानी किन यसरी सिँगारपटार गरिरहेको ?’ विनिताको जवाफ थियो, ‘म हिरोइन् बन्ने ।’ विनिताको यही जवाफसँगै सुरु भएको विनिताको कलाकारिता चपली हाइट सम्म आइपुग्दा एउटा उचाई चुम्यो । यही उचाईसँगै […]
यात्रा संस्मरणः परिवर्तनको पर्खाइमा बैतडी
प्रकाशित मिति : २०७३, ९ जेष्ठ आईतवार October 22, 2016
जीवन यात्रा हो र जीविका पनि । उकाली ओराली, श्रमको पसिना र विश्रामको शितलता अनुभूतिका पारखहरुले पाउने स्वाद र पारख हो । नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण मनोरञ्जनको विषय मात्र होइन सोचाइ, मानसिकता र जीवनशैलीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने सशक्त माध्यम पनि रहेछ । स्वास्थ्य, समय र परिस्थिति यस अनुकूल नभए पनि यात्रा मेरो जीवनको मूल शोखको […]
कथाः धरहरा प्रेम
प्रकाशित मिति : २०७२, १० फाल्गुन सोमबार October 22, 2016
फुंग उडेको कंक्रिटको जंगल पृष्ठ भागमा छ । अग्रभागमा मुसुक्क हाँसेको ‘सेल्फी’ । बैशाख १२, २०७२ विहान ठीक ११ः५० को समयमा फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरी । र लेखी– ‘म धरहराको सातौं तलामा छु ।’ बैशाखी हावामा उसका केश राशी नृत्यरत थिए । सँधै मुस्कुराई रहने उसको मुहार त्यो सेल्फीमा पनि उस्तै जादुयी मुस्कान छरिरहेको थियो […]
कविता पाठकका लागि बोझ हुनु हुँदैन्ः कवि सुमन घिमिरे
प्रकाशित मिति : २०७२, १ फाल्गुन शनिबार October 4, 2016
चितवन नेपाली साहित्यको उर्वर भूमि हो । वैंशको क्यालेण्डर कविता संग्रहदेखि उदाएका चितवनको सौराहा निवासी कवि सुमन घिमिरे उपन्यासकारको रुपमा परिचय खोज्दै छन् । ‘मौनता’ उपन्यास बजारमा ल्याउने तरखर गरिरहेका युवा साहित्यकार घिमिरेसँग हलकारोका लागि आदर्श प्रधानले साहित्य वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ साहित्यकार घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः आज भोलि के मा ब्यस्त […]
छुटेको जुत्ता :मानवीय संवाद र संवेदना !
प्रकाशित मिति : २०७२, ८ माघ शुक्रबार October 22, 2016
सरल, भद्र, लगनशील र स्वअनुशासित जीवन जिउन रुचाउने भोजराज न्यौपाने अनावश्यक शब्द आडम्बर र विद्धताको पाखण्डबाट मुक्त रहेर जनसरोकारका विषयमा लेख्न रुचाउने कविको नाम हो । ‘कवितामा सरलता र सरलतामा सुन्दरता’ का पक्षधर उनी साक्षर बाबु÷आमाहरूले समेत बुझ्न सक्ने ढङ्गले कविता लेख्न रुचाउँछन् । त्यसरी लेख्ने क्रममा लेखिन सक्ने कोरा नारा, गाली गलौज र हुन […]
मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो मेरो टोपी हिमाली भीर जस्तो कहिले पनि झुक्न नजान्ने कहिले पनि लुक्न नजान्ने मेरो टोपी नेपाली वीर जस्तो दार्जी्लिङ्को साँघुरो परिवेशबाट आफूलाई नेपाली खुला आकाशमा विचरण गराउन साथ गोपाल योञ्जनले यस्ता कालजयी गीत–संगीत सिर्जना गरे । राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत गीत–संगीत शिर्जनाको लहर नै ल्याए योञ्जनले । लाग्थ्यो, नेपाल आएपछि मात्रै उनले […]
जीवनमा कोलकाता पुग्नु सयोग थियो मेरा लागि । भारतका कुनै सहरको नामै नसुन्दा मैले कोलकाताको नाम सुनेको थिएं । मेरा कान्छा काका विकासको अनुहार नदेखेको काभ्रेको एउटा गाउंबाट ‘फ्रस्टेटेड’ भएर कोलकाताका गल्लीहरूमा लामो समय भट्किएका थिए । मेरा बाले उनलाई त्यहांका गल्लीबाट उतारेर यतै फर्काएका थिए । तर, काभ्रेको मझौला आकारको चिसो सहरमा उनको मन […]
यहीनेर उनीसंग भेट भयो । मायाको लाइनमा । लाइनमा महिलाहरु छन् र आफ्नो पालो पर्खिरहेछन् । उनी पनि मायाको लाइनमा आफ्नो पालो पर्खिरहेकी थिइन् । २६ वर्षकी उनले तीन वर्ष अघि लोग्ने गुमाएकी हुन् । आंतककारी विस्फोटमा परी उनका लोग्ने मारिएका । म पनि मायाको लाइनमा नै छु । तर म पालो पर्खिरहेकी छैन । […]
कविताः सपनाको खोज
प्रकाशित मिति : २०७२, १७ श्रावण आईतवार October 4, 2016
ए कमरेड ! हामी मालेमावाद पढेर माओवाद जिन्दावाद भन्दै मुक्ती संग्राममा उत्रिएर जाली फटाहा र सामन्तीका विरुद्ध नारा घन्काउँदै साम्यवादी समाजको परिकल्पनामा लिप्त जोश र जाँगरका साथ यो समाज फेर्ने अभिभारा बोकेर हिँडेका हैनौँ र ? आज प्रश्नहरुको पहाडमा उभिएर मेरो यान्त्रिक पाइलाहरु मेरो उद्देश्य र प्रतिफल खोजि रहेछन् कमरेड ! हजारौँ सहिदको रगतले कोरिएको […]